Yaka Tsvaga Injini Strategic Yakaunza iyo 2012 Super Bowl kuIndipolis? | Martech Zone
Wednesday, May 21, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwete, asi tinoda kufunga kuti zvine simba. Isu tinoziva kuti kuyedza kwedu, padiki-diki, kwakave nemhedzisiro yakabudirira mune yekutsvaga injini mhedzisiro. Panguva yekuzivisa, Iyo Yedu 2012 Super Bowl saiti yanga isiri pane chero SERP - asi nechiziviso, tisu chete guta raive nenzvimbo mune yekutsvaga injini mhedzisiro.
Zvinogona kunge zvakakwirira, asi chimwe chezvinangwa icho ini naPat Coyle takava nacho riini va neutsanzi yakatanga iyo Super Bowl webhu saiti yaive yekuona kuti webhu saiti yakabata zvinotsvaga injini uye yaive yakakurumbira saiti pawebhu. Yaive-uye nanhasi ichiri.
Taiziva kuti iyo NFL anga asiri kunyanyisa kutarisisa paInternet - asi isu taida kuti vamwe vese vaone Indy chete kana vachizvibvunza kuti ndiani aizvitora zvinotevera. Ndosaka ndakagara husiku hwese kuti ndiwedzere webhusaiti uye Pat akavaka zano rekubatanidza kukumbira mhinduro uye nhaurirano munzvimbo dzese dzedunhu senge IndyMojo, Nyeredzi yeIndiapolis, Ini Sarudza Indy, Mudiki Indiana, nezvimwewo, uye isu takanyorera rubatsiro rwevamwe matunhu blogger kuparadzira shoko.
Isu takatotangisa Super Bowl 2012 Youtube Channel kusundira mavhidhiyo kunze virally. Kuchengetedza saiti iri mhenyu mumainjini, isu takadhonza mune zvekudya kubva kune dzese dzenharaunda nhau uye mablog kuburikidza Yahoo! Mapaipi mune iro peji.
Apo iyo nhau yakanga isiri kuchinja, mavhidhiyo aive. Yakanga iri kuenderera mberi, kusingagumi kurwisa kwemukati uye backlinks kuyedza kuchengetedza saiti pane radar uye "Indianapolis" inoenderana ne "Super Bowl" uye "2012" mumapeji emhedzisiro. Innovative yakauraya zano zvine hungwaru - kugadzirisa uye kugadzirisa zvirimo pazvinenge zvichidikanwa.
Mazwi akakosha akatiunzira traffic yakawanda, traffic iriko yava kupaka izvozvi izvo Indianapolis inosarudzwa:
Ikozvino traffic yatama kubva pa ~ 150 kushanya pazuva kuenda kune spiking kuenda kune 9,000 kushanya:
Zvakanaka, pamwe Dennis Hopper akabatsira!
Tarisa uone yepamusoro resolution yeiyi vhidhiyo ku Yedu 2012 Super Bowl Website.
Zvichida chikuru chikamu cheichi ndechekuti kukura kwenzvimbo uye kuiswa kwayo kwakaitwa kuburikidza nechena-ngowani (kwete yakaipa) mazano. Rakareruka izwi rekushambadzira kwemuromo, rakakura saiti dhizaini, zvemukati kuisirwa, mablog, uye zvemagariro midhiya, nezvimwe - mune yakazara nzira - yakaratidza kuve anokunda. Yakanga iri mushandirapamwe wakanaka uye tinovimba isu takaita chikamu chidiki mukuyedza kuunza iyo Super Bowl kuIndipolis!
Zvakanakisisa pane zvese, zvaisada kuedza kwakawanda - kungoita zano rakawanda kumberi uyezve kuona kuti zano rakaenderera mberi richiitwa. Kutenda kwakakosha kuna Mark Miles naPat Coyle nekunditendera kuti ndibatsire timu. Zvakare nekutenda kuInnovative yekutsungirira yangu yepakati pehusiku edhiyo uye zvido - zvaive zvakanaka.
Tags: 2012 Super mbiyaSearch Engine Optimizationseonakisa mbiya
May 21, 2008 pa 7: 20 PM
Basa rinoshamisa kune VOSE vanoisa munguva yekuita iyi hombe kuhwina yeIndipolis kuitika svondo rino. Doug, uri gamba rangu.
May 21, 2008 pa 7: 48 PM
Ndatenda nerubatsiro rwako futi! Ini ndaive chaizvo, chaizvo, chidiki chidiki chikamu cheichi chiitiko. Ndinofunga ndakadhonza imwe-night uye ndikapinda misangano mishoma. Dzimwe nhengo, kusanganisira webhu timu paInnovative, inoisa akawanda, maawa akawanda vhiki imwe neimwe.
Zvanga zvichinakidza! Uye kutungamira kusvika 2012 ichave inonakidza!
May 21, 2008 pa 7: 32 PM
Ndiri kushamisika kuti imi mese makatora edu2012sb pachinzvimbo che
May 21, 2008 pa 7: 50 PM
Kubata kwakanaka, Stefano. Chaizvoizvo iro zita rezita uye webhu dhizaini zvakaitwa pamberi pangu naPat tisati tasvika. Taifanirwa kushanda nezvakange zviripo pane kuenda zvedu. Ndingadai ndaka - - - sarudza dura yaive ne "2012" uye "super" uye "mbiya" mairi. Uye ini pamwe ndingadai ndakave neiyo saiti yakaiswa mune yekadirectory inonzi "indy". 🙂
Oo, uye makorokoto!
May 21, 2008 pa 7: 51 PM
Ndatenda! Yakanga iri nharaunda kuyedza - kusanganisira vezvenhau masaiti uye mabloggi kubva kumatunhu ese! Wese munhu akatora nguva yekunyora nezvazvo akabatsira.